Turkey oo diiwaan gelisay kiisas cusub oo Coronavirus ah
Masjidka Fatih ee Istanbul oo laga baabi'inayo Coronavirus
Turkey ayaa heshay 12 kiis oo cusub oo ah Coronavirus, taasi oo ka dhigeysa tirada guud ee dadka laga helay 18, sida uu Isniinta sheegay wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca.
Tirada cusub ayaa ka dhigeysa korokii ugu badnaa ee hal maalin la diiwaan geliyo, tan iyo toddobaadkii tegay markaasi oo lagu dhowaaqay kiiskii ugu horreeyey ee la xiriira fayruskan.
Koca ayaa sheegay in laba ka mid ah kiisaska cusub ay la xiriiraan kiiskii ugu horreeyey ee dalka laga diiwaan geliyey, halka toddobada ay u safreen Yurub, saddexna Mareykanka.
Arbacadii tagtay, Turkey ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyey ee ka mid ah quwadaha dhaqaalaha adduunka ee laga helo fayruska, kadib markii ay qaaday wax Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO uu ku qeexay tallaabooyin “feejignaan” leh oo ay ku dib dhigeyso.
Wixii markaas ka dambeeyey dowladda ayaa sare u qaaday tallaabooyinka lagu hakinayo faafitaanka fayruska, ayada oo la xiray iskuulada iyo jaamacadaha, la hakiyey duulimaadyada dalal dhowr ah, islamarkaana dhacdooyinka cayaaraha la qabanayey daawadayaal la’aan.
Kumanaan Tukish ah, oo kasoo laabtay Cumrah ay u aadeen Sacuudi Carabiya ayaa Axaddii loo qaaday goobo lagu karantiilo, wxaana Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay sheegtay in baararka iyo goobaha lagu caweeyo la xiri doono laga billaabo Isniinta, si loo yareeyo halis faafitaanka Coronavirus.